WINDOWS 10 ကိုတစ်ဦး FOLDER ကိုဖုံးကွယ်ဖို့ကိုဘယ်လို - WINDOWS ကို - 2019
Windows 10 ကိုပုန်းအောင်း Folders
OS ကိုမဆိုအခြား operating system ကဲ့သို့မူအရ, 10 windose Build - ၎င်း၏ applications များ, ပုံမှန်အားဖြင့် enabled ဖြစ်ကြောင်း setting များကို - ဆော့ဖ်ဝဲစနစ်ဒီဇိုင်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်အဆိုပါတည်ဆောက်အရေအတွက်ကို သိ. မိမိအပြဿနာများ, settings ကို၏ရှုပ်ထွေးပွေလီလှနှင့်တူသောအကြောင်းကို, ထုတ်ကုန်အကြောင်းပြောဆိုရန်လွယ်ကူနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်တစ်ခါတစ်ရံအချစ်ဆုံးသောနံပါတ်များကိုသိရန်လိုအပ်လည်းမရှိ
Windows 10 ကိုအဘို့တည်ဆောက်အရေအတွက်ကိုကြည့်ရှုခြင်း
သင်တပ်ဆင် OS ကိုအကြောင်းသင်ယူကူညီပေးနိုင်ပါသည်များစွာကွဲပြားခြားနားသောဆော့ဖ်ဝဲကိုထုတ်ကုန်ရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင်တူညီတဲ့သတင်းအချက်အလက် 10. လူကြိုက်အများဆုံးသူတွေကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ windose စံ tools တွေကိုသုံးပြီးရယူနိုင်ပါသည်။
AIDA64 - အစွမ်းထက်ပေမယ့်သင်တို့ရှိသမျှသည်သင့် system အကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူနိုင်သည့်နဲ့ပေးဆောင် tool ကို။ အသုံးပြုသူအနေဖြင့်ပရိသရှုမြင်သာအဓိက Menu ထဲမှာ program ကို install လုပ်ရန်လိုအပ်သည်, select လုပ်ပါရန် "Operating System ကို"။ အဆိုပါတည်ဆောက်အရေအတွက်ဂရပ်ထဲမှာဖော်ပြပါတယ် "OS ဗားရှင်း" လည်ပတ်မှုစနစ်၏ဗားရှင်းကိုညွှန်းပထမဦးဆုံးဂဏန်းပြီးနောက်။
Method ကို 2: SIW
ဒါဟာတရားဝင် site မှ download လုပ်နိုင်သည့်အလားတူလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့် utility ကို SIW ရှိပါတယ်။ AIDA64 ထက်ပိုပြီးအတားအဆီး interface ကိုအတူ, SIW သင်တို့ကိုလည်းပရိသတ်အတော်များများအပါအဝင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကွန်ပျူတာပေါ်မှာရှိသမျှလိုအပ်သောအချက်အလက်များကိုကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, သင် SIW တပ်ဆင်ရန်နှင့်ဖွင့်လှစ်ဖို့လိုပါတယ်, အဲဒီနောက် main menu ကိုအတွက်လျှောက်လွှာအမှတ်၏ညာဘက်အခြမ်းကိုနှိပ် "Operating System ကို".
SIW အစီအစဉ်ကို Download လုပ်ပါ
Method ကို 3: PC ကို Wizard ကို
ဤသူသည်သင်တို့လိုအပ်ပါတယ်အတိအကျကဘာလဲ - သင်ပထမဦးဆုံးနှစ်ဦးကိုအစီအစဉ်များအပေါ်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလျှင်ဝိညာဉျသဖြစ်ကြသည်က PC ကို Wizard ကိုမှဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကနည်းနည်း app အားစနစ်နှင့် ပတ်သက်. အပြည့်အဝသတင်းအချက်အလက်နှင့်တကွသင်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ရုံ AIDA64 နှင့် SIW အဖြစ်ကို PC Wizard ကိုကုန်ပစ္စည်းများ၏သရုပ်ပြဗားရှင်းသုံးစွဲဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေနဲ့ပေးဆောင်လိုင်စင်ဖြစ်ပါသည်။ အဓိကအားသာချက်၏လျှောက်လွှာ၏ကျစ်လစ်သိပ်သည်းဒီဇိုင်းနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်ကိုဖြစ်ပါတယ်။
PC ကို Wizard ကိုအစီအစဉ်ကို Download လုပ်ပါ
PC ကို Wizard ကိုအသုံးပြုပြီးအသင်းတော်ကိုသည့်စနစ်နှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်များကြည့်ရှုရန်ဤခြေလှမ်းများလိုက်နာပါ။
ကိုသွားပါ "ပြုပြင်" နှင့်ကို select "Operating System ကို".
ဖြစ်စဉ်ကို 4: System ကိုန့်သတ်ချက်များ
အခန်းတစ်ခန်းကို 10 သင်ယူစနစ် parameters တွေကိုနှင့်အတူ familiarized နိုင်ပါတယ် windose ။ ဒါကြောင့်အပိုဆောင်း software ကို install လုပ်ဖို့အသုံးပြုသူမလိုအပ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနည်းလမ်းကို, ယခင်သူတွေကိုထံမှကွဲပြားနေသည်။
အကူးအပြောင်းလုပ် "Start ကို" -> "Options ကို" သို့မဟုတ်ပဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ «ဦးဝင်း + I ကို».
ဆိုသော build number ကိုကြည့်ပါ။
Method ကို 5: စစ်ဌာနချုပ် Window
မည်သည့်အပိုဆောင်း software ကို install လုပ်မလိုအပ်ပါဘူးတဲ့ဝန်ထမ်းများမှနောက်ထပ်ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သင်း၏စုံတွဲတစ်တွဲလုပ်ဆောင်ဆိုသော build number ကိုထွက်ရှာတွေ့ဖို့လုံလောက်ပါတယ်။
စာနယ်ဇင်းများ "Start ကို" -> "Run ကို" သို့မဟုတ် «ဦးဝင်း + R ကို».
ပရိသ ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်ကိုဖတ်ပါ။
ဤတွင်ထိုကဲ့သို့သောရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းများသည်သင့် OS ကိုပရိသတ်အကြောင်းကိုအားလုံးလိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်ကိုရှာဖွေမယ့်မိနစ်အနည်းငယ်ရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာတကယ်ခက်ခဲများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီအသုံးပြုသူ၏တန်ခိုးမဟုတ်ပါဘူး။